Akhriso: Taariikh kooban oo ku saabsan madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo maanta ku geeryooday Nairobi – Kalfadhi
March 10, 2021 Hassan Istiila
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed, ayaa maanta ku geeryooday isbitaal ku yaalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo uu ku xanuunsanayay maalmihii lasoo dhaafay.
Xubno ka tirsan qoyskiisa oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida marxuumka.
TAARIIKH NOLOLEEDKA CALI MAHDI OO KOOBAN;
Cali Mahdi Maxamed wuxuu ku dhashay tuulada cadow-uul oo ka tirsan shabeelada dhexe sanadku markuu ahaa 1938.
Cali Mahdi wuxuu wax ku bartay iskuulaadkii Xamar ka jiray. Cali Mahdi 1959 ayaa Qaahira u aaday waxbarasho . Cali Mahdi wuxuu fursad u yeeshay in uu xubin ka noqdo baarlamaanka Somaaliya sanadkii 1969, asagoo noqday qofkii ugu dhalinyaraa ee xubin ka noqda baarlamaanka Soomaliyeed.
Marxuum Cali Mahdi ayaa ku dhintay da’ada 92-sano..